Miavo-tena mba hiangana ny gazety iray ao Myanmar amin’ny fiteny Mon rehefa nitolona 20 taona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Desambra 2019 5:38 GMT
Ny endrika orizinalin'ity lahatsoratr'i Lawi Weng ity dia nivoaka tao amin'ny The Irrawaddy, tranonkalam-baovao mahaleotena iray ao Myanmar. Ny endrika nasiam-panovana no navoaka eto amin'ny Global Voices ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Vao nankalaza ny faha-20 taona niasany ny gazety iray mivoaka isa-kerinandro ao Myanmar amin'ny fiteny Mon manana ny anarana Guiding Star [Kintana Mpitari-dalana]. Niresaka tamin'i Nai Kasauh Mon, lehiben'ny tonian-dahatsoratra sady mpanorina ny gazety izahay, momba ireo fanamby amin'ny famoahana amin'ny fiteny Mon ao amin'ny tontolo iray matetika vinitra manoloana anao.
Manana olona 2 tapitrisa avy amin'ny foko Mon i Myanmar, ary manodidina ny folo isanjato amin'ireo no mamaky ny Kintana Mpitaridalana, izay miorina ao Mawlamyine, renivohitry ny Fanjakana Mon.